Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Izithintelo zincitshisiwe e-Bangkok njengoko amanani e-COVID ewela kwi-30%
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Abaxhasi ngoku akukho mfuneko yokuba bagonywe ngokupheleleyo kwaye / okanye baphumelele uvavanyo lwe-COVID-19 ukuze batye kwiindawo zokutyela nakwiivenkile zokutyela kwimimandla ebomvu-emnyama.
I-Bangkok inciphisa izithintelo ze-COVID-19 njengoko inani losulelo olutsha luyehla.
Abaxhasi beevenkile akusafuneki ukuba bagonywe ngokupheleleyo ukuze badle ngaphakathi.
Nge-9 pm-4am ixesha lokubuya liya kuhlala likhona nangona kunjalo.
Ngokosuleleka okutsha okuwe ngama-30% kwezi veki zimbini zidlulileyo iSebe lezeMpilo likaRhulumente kunye nabanye abathathi-nxaxheba baceliwe yi-Nkulumbuso yase-Thai u-General Prayuth Chan-ocha ukuba eze namanyathelo okumisela ifuthe kumanyathelo okwehla kwinani losulelo.
Abaxhasi ngoku akukho mfuneko yokuba bagonywe ngokupheleleyo kwaye / okanye baphumelele uvavanyo lwe-COVID-19 ukuze bayokutya kwiivenkile zokutyela nakwiindawo zokutyela ezimnyama-kubomvu, ngokwesibhengezo samva nje kwiRoyal Gazette yaseThailand, uxele iBangkok Post.
Isibhengezo siphikisana neengxelo zangaphambili ezazisithi iivenkile ezinqwenela ukuphinda zivulwe ziyakufuneka zithintele iinkonzo zokutya kubantu abagonywe ngokupheleleyo kunye / okanye abo baphumelele uvavanyo lwe-COVID-19 ngekhithi yovavanyo lwe-antigen ngaphambi kokungena.
Kunye nokuncitshiswa kwezinye ze-COVID-19 curbs ezazingqinwe liziko le-COVID-19 Situation Administration (CCSA), iivenkile zokutyela kunye namanye amashishini alungiselela ukuvula, nangona i-9 pm-4am curfew iya kuhlala isendaweni, ngelixa zonke Abasebenzi bayacelwa ukuba basebenze ekhaya de kube ngu-14 kuSeptemba.
Iindibano zasesidlangalaleni ezingekho ngaphezulu kwama-25 abantu ziya kuphinda zivunyelwe kwimimandla ebomvu-emnyama, nangona imvume yabasemagunyeni.
In BangkokIzikolo ziya kuvunyelwa ukuba ziphinde ziqale ngokufundisa abantu, ukuba bayazifezekisa iimeko ezibekwe liSebe leMfundo kunye noMphathiswa weMfundo ePhakamileyo, iNzululwazi, uPhando kunye neNtsha.
Ukuqala namhlanje iisaluni zobuhle kunye neevenkile zokucheba iinwele nazo ziya kuvulwa, nangona kungekho kungena kuya kuvunyelwa. Ii-Spas kunye neparlour parls, okwangoku, zinokubonelela kuphela ngemithambo yeenyawo.
Ngapha koko, ukuhamba phakathi kwamaphondo ukusuka kwimimandla ebomvu-emnyama akusayi kuphinda kuthintelwe. Iinqwelo-moya nazo ziya kuvunyelwa ukuba ziqhubeke neenkonzo zabagibeli, ukuba nje izihlalo zikhawulelwe kumthamo wama-75%, utshilo uGqirha Taweesilp.
Ngokwahlukileyo, i IOfisi kaZwelonke yoKhuseleko lwezeMpilo (NHSO) bameme abasebenzi becandelo leendwendwe ukuba bathathe uvavanyo lwe-COVID-19 yasimahla phakathi kuka-Agasti 31 noSeptemba 3 kwizakhiwo zikarhulumente ezinkulu eBangkok ezinakho ukuqhubekekisa abantu abayi-1,500 suku ngalunye.